Ahoana no fomba ahazoana maimaim-poana ny Photoshop CS5?
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Ahoana Ny Fomba Ahazoana Photoshop CS5 Maimaim-Poana & Ara-Dalàna
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2022-01-11, Malagasy Blog
Mifanaraka: Windows, macOS
Tsy fantatrao raha ara-dalàna tanteraka ny fampiasana Photoshop CS5? Tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity. Ho hitanao ny fampahalalana lehibe rehetra momba ity programa ity. Ankoatr'izay, ianao dia hianatra momba ny fomba azo antoka hahazoana Photoshop CS5 maimaim-poana ary handinika analogi tsara be dia be amin'ity programa ity.
Photoshop CS5 tombontsoa maimaim-poana
Fandehanana miasa mahavariana
Sarin-tsary HDR nohavaozina
Fanitsiana ny solomaso mandeha ho azy
Fanodinana manta nohavaozina
Fenoy ny atiny-fahafenoana
Mamonjy fisie XFL
Torolàlana mahasoa sy fanohanan'ny mpanjifa
Inona ny vidin'ny Photoshop CS5?
Raha ny fahazoan-dàlana mandritra ny androm-piainana, ny vidin'ny Photoshop CS5 dia $ 699 ho an'ny kinova feno ary $ 199 ho an'ny fanavaozana. Fa azonao atao koa ny mampiasa kinova andrana maimaimpoana.
FANAZAVANA FITSARANA MAIMAIMPOANA
Ahoana no hanombohana Photoshop CS5?
Fidio ny rakitra fisie Adobe Photoshop CS5, izay heverina fa hapetraka ao amin'ny folder Applications / Adobe Photoshop CS5.
Ahoana no hanomboka Photoshop CS5 tamin'ny 32-bit sy 64-bit fomba:
Mandehana any amin'ny Files Files (x86) > Adobe > Folder Adobe Photoshop CS5.
Kitiho indroa ny rakitra Adobe Photoshop CS5.exe.
Mbola azo atao ve ny mampiasa Photoshop CS5?
Mbola manana fahafahana hanatsarana Photoshop CS6 CS5 ho any. $ 199 no vidin'ny kinova tsy mitatra.
Mifanaraka amin'ny Windows 10 ny Photoshop CS5?
Eny, mba hametraka Adobe Photoshop CS5 amin'ny Windows 10 - ianao fotsiny mila hanomboka ny rakitra ao amin'ny fifampifanarahana mifamadika setup Mode for Win 7. Right-Tsindrio eo amin'ny fisie, mankanesa any Properties & gt; Fifampifanarahana, fidio Win 7 ary kitiho indroa ny rakitra fanamboarana. Aza adino fa ny Adobe Application Manager dia tsy mandeha amin'ny Win 10.
Misy programa maimaim-poana mitovy amin'ny Photoshop CS5?
Eny, azonao atao ny mampiasa ny kinova finday amin'ny Photoshop antsoina hoe Photoshop Express . Azo alaina finday Android sy iOS izy io.
Fomba iray hafa hampiasana Photoshop CS5 Free
Raha sanatria manova sary matetika ianao eny am-pandehanana, ohatra, amin'ny telefaona finday, dia misy fampiasa Ps ho an'ny finday ofisialy – tsy maintsy ananana ho anao ny Adobe Photoshop Express. Hita maimaim-poana izy io, mirehareha amin'ny fidirana amin'ny Creative Cloud ary na dia ny fisian'ny rahona misy azy aza.
Mifanaraka: iOS, Android
Tombontsoa Photoshop Express:
Manokatra fisie RAW
Betsaka ny effets sy sivana
atao ny manampy sisintany sy lahatsoratra
Manamboatra fomba fijery
Fampiharana tsy mazava
Express dia kinova Ps voafetra mifanaraka amin'ny iOS sy Android. Ny fampiharana dia manome fidirana amin'ny Facebook, Adobe ID management, ary 3G data transfer options.
Midera ny rindrambaiko ho an'ny interface intuitive ary tsy mila fahaizana manokana. Noho izany, hahaliana ny zaza vao teraka amin'ny sehatry ny endrika sary sy sary. Maimaimpoana ny sehatra, izay misy ifandraisany indrindra amin'ny tsirairay, mpianatra, matihanina manomboka, mpiasan'ny orinasa vao manomboka ary orinasa kely.
Misy tranonkala marobe manolotra ny mpampiasa hisintona ny programa miaraka amina fahazoan-dàlana mihetsika maimaimpoana. Te hampitandrina anao aho raha tsy manindry ny rohy toy izany sy misintona rindrambaiko avy amin'ireo tranonkala mampiahiahy. Etsy ambany, holazaiko ny antony lehibe tsy tokony hanaovanao izany.
Heloka bevava izany
Angamba misy tsy manahy momba an'ity olana ity ary tsy mihevitra ny fampiasana rindrambaiko voajirika ho mahamenatra izy ireo. Saingy mifanohitra amin'izay no iheveran'ny fehezan-dalàna.
Jereo ny ny fomba fividianana Photoshop amin'ny vidiny mora indrindra.
Tsy misy Fanohanana Teknolojia
Raha misy zavatra tsy mety aorian'ny tsindrio ny rohy “Fampidinana maimaimpoana Photoshop CS5” sy nametrahana ilay programa dia tsy azonao atao ny manefy azy, na misy olana vitsivitsy dia avela irery ianao amin'izany rehetra izany. Satria tsy hisy hanome fanampiana ara-teknika anao - tsy mpanjifa orinasa namolavola ity vokatra ity ianao.
Raha mividy fahazoan-dàlana ianao dia ho afaka hifandray amin'ireo mpamorona amin'ny alàlan'ny fanohanana ara-teknika, hamaha olana marobe amin'izy ireo mivantana ary hahazo torohevitra manokana.
Hijery ny fomba hahazoana Photoshop CS6 maimaim-poana.
Ny tsy fisian'ny fanavaozana
Amin'ny fampiasana ny kinova ofisialy, manome ny fanavaozam-baovao farany anao avy hatrany ianao. Amin'ny fampiasana ny sary Photoshop CS5, mety hadinonao ny momba ny fanavaozana, mety ho very ny tahirin-kevitrao manokana sy ny fisintomana viriosy maro.
MAIMAIM-POANA PHOTOSHOP MAIMAIMPOANA
Eny, Photoshop no programa matihanina sy matanjaka indrindra eo amin'ny rindrambaiko fanovana sary tsara indrindra ho an'ny PC. Fa afaka mahita analogie maimaimpoana marobe koa ianao.
Mety hitantana sy handamina sary
Fanitsiana lens sy fakantsary
Fitaovana mandroso amin'ny fanitsiana loko miloko
Famantarana sy fanamarihana ny tarehy
Mety hanao tsy milamina amin'ny PC malemy
Lightroom no safidy mety indrindra ho an'ireo izay liana amin'ny fanitsiana loko lalina, fanitsiana ny sary RAW ary fitantanana sary. Ankoatr'izay, maro ny mpampiasa no mankafy an'i Lightroom noho ny fisongadin-dahatsoratry ny famokarana sary miaraka amin'ireo borosy sy preset efa nomena. Izany rehetra izany dia ahafahana mahazo sary voadika arak'asa na dia ho an'ireo vao novambra aza.
no namboarina ho rindrambaiko mivantana sy ho fanampin'ny Photoshop ho an'ny mpitifitra za-draharaha ilay rindrambaiko tamin'ny voalohany. Saingy tsy ela dia nivadika rindrambaiko ho an'ny tsirairay izy io. Lightroom dia natao hanovana ireo rakitra RAW amin'ny ankapobeny. Ny fiasan'izy io dia mifanaraka amin'ny maodelin'ny Camera RAW, saingy tsy mitovy ny fandaminana ireo fitaovana, ary miovaovaova kokoa ny fisafidianana ny fitaovana.
Vakio ny Famerenana Lightroom feno.
Function azo namboarina
Fitaovana manankarena- sy fitaovana fananganana
Miasa amin'ny karazana rakitra isan-karazany
Miasa miaraka amin'ny fetra
GIMP dia analog maimaimpoana malalaka open-source Photoshop CS5 ho an'ny olona rehetra izay tsy vonona ny hividy mpanonta sary efa mandroso. Izy io dia mety tsara amin'ny fanatanterahana asa amin'ny ambaratonga fototra, toy ny sary hosodoko, famerenana sary indray ny sary, fanovana rakitra miaraka amina endrika hafa misy, fikarakarana sary batch an-tserasera.
GIMP no mifanaraka amin'ny rafitra fandidiana toy izany toy ny Windows, Mac sy Linux. Ankoatr'izay, ny GIMP dia manohana ny ankamaroan'ny endrika fisie miely: GIF, JPEG, PNG ary TIFF.
Vakio ny Famerenana GIMP feno.
Fanohanana ireo endrika fisie maro
Tsy misy asa sasany
Mety tsy hanana kalitao intsony ireo rakitra voaova
PhotoScape dia analogie maimaimpoana Photoshop CS5 mendrika ho an'ny birao na solosaina finday mandeha amin'ny rafitra fiasa Windows. Raha ny hevitry ny mpampiasa vao vao maro, ity rindrambaiko ity dia mety hisolo an'i Ps raha ny amin'ny toe-javatra fanovana sary nomerika maro. Ny habaka ho an'ny mpampiasa dia voalamina amin'ny endrika tsoratadidy– samy mamaha asa manokana ny tsirairay amin'izy ireo.
fanampiny karazana endrika sy ny taratasy fametaka no nanatitra ho saran'ny amin'ny $ 0,99 isaky ny anareo tsy ho toy ny. Azonao atao koa ny mividy ny kitapom-bola rehetra aloa indray mandeha ary mampihetsika ireo fitaovana voamarika PRO ho $ 29,99. Na ilaina izany na tsia dia raharaha ilain'ny tsirairay.
Zahao ny Fijerena feno ny PhotoScape.
Ny mpampiasa dia mety misintona rakitra na manangona azy ireo amin'ny rahona
Misy ny App Chrome
Afaka mamorona zoom amin'ny alàlan'ny kodia totozy
Ny fisian'ny doka sy bibikely
Pixlr dia safidy tsara ho an'ireo izay mitady analogy maimaimpoana amin'ny Photoshop CS5 amin'ny Internet. Na ny mpampiasa na ny orinasa tsirairay dia samy afaka manararaotra an'io sehatra mifototra amin'ny Flash io nefa tsy mandoa na inona na inona - fa mety hiova ny toe-javatra amin'ny ho avy. Pixlr dia mety tsara amin'ny tranga rehefa mila manova haingana ianao amin'ny hetsika.
Ny fampiharana dia mitaky ireo mpampiasa hifandray amin'ny Internet - dia izay. Mba hanombohana ny fanovana sary dia mila mampakatra azy io amin'ny fitaovana fotsiny ianao, toy ny mpanonta sary mahazatra rehetra. Tsy tokony hanahy ny amin'ny filaminan'ny fisie nakarina an-tserasera ianao. Natao ho an'ny tsy miankina izy ireo, miaraka amin'ireo fanodikodinam-panitsiana sary nataonao. Ankoatr'izay, Pixlr dia tsy mitahiry ny dika mitovy amin'ireo rakitra ao amin'ny rafitr'izy ireo.
Vakio bebe kokoa momba ny Pixlr Photo Editor.
Mora takatra ny UI
Manitsy sary haingana sy mahomby
Dingana tsy manimba
Mahay mandamina sary
Ilaina ny fisoratana anarana maimaim-poana
LightZone dia programa aorian'ny famokarana sary misy fahaiza-manao matihanina. Ireo mpampiasa dia tsy hanana olana amin'ny famoahana izany ary hanana fifehezana feno ny fizotrany. Miaraka amin'ny fanampian'ny LightZone, azo atao ny manamboatra sary haingana sy haingana ary aza mihodina amin'ny fanitsiana maro. Ankoatr'izay, mpitifitra be dia be no mahita fa mahasoa ny LightZone raha ny amin'ny fanitsiana ny fampisehoana sary.
Misarika ny maso ny LightZone miaraka amin'ny fanovana tsy manimba sary misy endrika samihafa, ao anatin'izany ny RAW. Amin'ny ankapobeny dia analogie maimaimpoana Photoshop CS5 tsara izy io noho ny fizotran'ny famokarana sary tsy misy manahirana.
Vakio ny Famerenana Lightzone feno.
Ny hetsika fahaiza-manao sy ny overlay dia be fangatahana eo amin'ireo mpampiasa Photoshop CS5. Ireo fitaovana ireo dia noforonin'ny mpanonta sary mahay ary afaka manatsara ny sary rehetra amin'ny tsindry iray monja. Zahao ny hetsika maimaimpoana sy ny overlay izay nomaniko ho anao eto ambany.
Sintomy ny Photoshop CS5 Free
Photoshop CS5 Maimaim-poana Ho an'ny Mac / Win
Photoshop CS5 Maimaimpoana Ho an'ny iOS / Android
Tsindrio ity rohy “Adobe Photoshop CS5 maimaim-poana misintona maimaimpoana” azo antoka ity ary alao amin'ny fomba ara-dalàna ny programa ho an'ny PC. Tsy maninona na mpampiasa efa za-draharaha ianao na mpitovo vaovao, azonao antoka fa hahazo rindrambaiko amin'ity programa ity ianao ary hamoaka fanovana natao tamina sehatra matihanina.
Tombony azo amin'ny Photoshop CS5